Rasaasa News – Qurbo Joog Qado Lagu Dul Canaantay!
Qurbo Joog Qado Lagu Dul Canaantay!
on June 6, 2014 11:16 am
Jijiga, June 6, 2014 – Qado maalin dhawayd Hoteelka Xamda, loogu qabtay Qurbo joog, ayaa kolkii dambe isu rogtay caraatan iyo cadho. Warkan waxaa na soo gaadhsiiyey Qurbo-joog oo diiday in magaca la sheego.
Gudoomiyaha haweenka, caruurta iyo ciyaaraha Raxmo Suldaan Maxamud Haybe, oo qado ugu qabatay Hotelka Xamda, Qurbo joog haween u badan oo hantaaq kala huleelay.
Xili lagu jiray qadada ay qabtay marwo Raxmo, ayaa waxaa si aan ku talo gal ahayn ku soo galay Hoteelka Cabdulahi Yusuf Weerar [Cabdulahi-Atobiya], oo ah madaxwayne ku xigeenka, Hogaanka Cadaalada iyo Hogaanka Nabadgaliyada. Cabdulahi Atobiya, oo maalin ka hor uun ka soo laabtay degmada Rab-dhuure ee gabalka Bakool, Somaliya.
Cabdulahi-Atobiya oo la hadlay Qurbo-joogta, xili ay ku guda jireen gudashada qadada. Cabdulahi-Atobiya, sida la sheegay wuxuu saydhay hadal aan laga filayn, isaga oo yidhi “waan ognahay waxa aad halkan u timaadeen,” “hadaydaan wax ka qaban karin dadka dibada jooga, imaantinkiinu waa bilaash.”
Cabdulahi Atobiya, oo sii waday hadalkiisa ayaa yidhi “wixii la idin gashado waa in aad gudaan.”
Hadalka Cabdulahi-Atobiya, waxaa aad uga xumaaday qaar ka mida Qurba joogta Qadada la siiyey. Kuwaas oo u qaatay in hadalku yahay Quudhsi lagu talo galay.
Marwo Raxmo Suldaan oo qadada samaysay oo aan lafteedu farxin, ayaa maslaxday Qurbojoogta cadhootay, ka dib kolkii uu tagay Cabdulahi-Atobiya.
Lama garanayo wax ka keenay Cabdulahi-Atobiya, hadalkan turuqa iyo quudhsiga ah ee la qoonsaday.
Xan laga helay Qurbojoogta ayaa leh; Hoteelka Nogob, oo awal hore martida la gayn jiray ayaa hada diiday in uu qaabilo martida aan lacagta wadan. Ka dib kolkii ay isku khilaafeen Kilalka lacago badan oo hudheelku ku yeeshay Qurbojoogta la dajiyey.